हरेक वर्ष ४ करोड घरधुरी ग्राहक बन्छन् ! – HamroKatha
हरेक वर्ष ४ करोड घरधुरी ग्राहक बन्छन् !
कोलगेट टुथपेस्टमा करिव ३७ हजार कामदार छन् । र सन् २०१४ मा गरिएको एउटा अध्ययनले भन्छ, वर्षमा १ करोड ९० लाख नयाँ पसलले कोलगेटको टुथपेस्ट विक्रि गर्छन् । र करिव ४ करोड नयाँ घरधुरीले कोलगेट टुथपेस्ट प्रयोग गर्छन् ।
हाम्रो कथा २०७६ जेठ १७ गते १५:३८
तस्वीर : RealWear
यो कथा एउटा ब्राण्डको हो । जसको कथामा संघर्ष कम, सफलताको छाप बढि पाइन्छ । जसको विश्वव्यापि मार्केट पेनिटे – सन् करिव ६८ प्रतिशतको छ । र नेट इनकम करिव २.४ विलियन अमेरिकि डलर । यो कथा हो दाँत माझ्ने टुथपेस्ट कोलगेटको । र कथाका पात्र हुन्, विलियम कोलगेट ।
यात्राको सुरुवात करिव २ सय १२ वर्षअघि अर्थात् सन् १८०६ मा भएको थियो । जतिबेला विलियमले न्युयोर्क शहरमा साबुन तथा मैनबत्तिको उद्योग सञ्चालन गरेर बसेका थिए । तर सन् १८३३ मा उनलाई हृदयघात भएपछि कम्पनिमा सेल्स् निकै घट्न थालेछ । केहि वर्ष त जेनतेन उनले उद्योगलाई जीवित नै राखेका थिए ।
तर सन् १८५७ मा कोलगेटको मृत्यु भयो । उनको मृत्युपछि छोरा स्यामुएल कोलगेटले कम्पनिलाई ‘विलियम कोलगेट एण्ड कम्पनि’ बाट ‘कोलगेट एण्ड कम्पनी’मा रुपान्तरण गरे । कम्पनीलाई केहि समय चलाइ सकेपछि सन् १८७२ मा परफ्युम्ड सोपको उत्पादन थाले र सन् १८७३ बाट मात्र कम्पनीले टुथपेस्ट उत्पादनमा हात हालेको हो । त्यतिबेला कोलगेट यस्ता बट्टामा विक्रि गरिन्थ्यो ।
सन् १८९६ बाट मात्र कोलगेट यस्ता ट्युबमा उत्पादन गर्न थालिएको हो । र त्यहि सालबाट कम्पनिले आफ्नो रिसर्च ल्याब पनि सञ्चालनमा ल्यायो । र सन् १९०८ बाट मात्र कोलगेटको मास उत्पादन थालिएको थियो । त्यसपछि कोलगेट टुथपेस्ट उत्पादनमा १ नंबर कम्पनि बनेर उदायो । तर पछि पि एण्ड जी कम्पनिले फ्लेववर्ड टुथपेस्टको उत्पादन थालेपछि भने कम्पनिको एक नंबर पोजिसन खोसिएको थियो ।
सन् १९९२ मा भारतमा कोलगेटको उद्योग स्थापना भयो । जसले भारत र नेपालको बजारलाई लक्षित गरेर उत्पादन गथ्र्याे । र सन् १९९९ मा त कोलगेट पुनः सबैभन्दा धेरै विक्रि हुने ब्राण्डको रुपमा उदाइसकेको थियो । सन् २००७ मा एन्भरटाईजिंग स्टयान्डर अठोरिटीले गरेको एउटा अध्ययनले त ५ जना डेन्टिस्ट मा ४ जनाले कोलगेट नै रोज्ने भनेर देखाएको थियो । तर पछि यो प्रतिवेदनलाई भ्रामक भएको समेत आरोप लागेको थियो ।
यस्तै आरोप प्रत्यारोप खेप्दै अघि बढेको कोलगेटको सन् २०१५ मा कुल सम्पत्ति करिव ७.५ विलियन अमेरिकि डलर बराबरको थियो । जसमा कोलगेट अन्तर्गतका अन्य प्रोडक्टहरु जस्तै स्याम्पु, डिटर्जेन्ट आदि को पनि ठूलो हिस्सा थियो । भनिन्छ हाल संसारका करिव आधा घरपरिवारले किन्ने एउटै कमन घरेलु प्रोडक्ट भनेको कोलगेट कै टुथपेस्ट हो । टुथपेस्ट बजारमा हाल उसको कुल हिस्सा करिव ४५ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिन्छ ।
कोलगेट टुथपेस्टमा करिव ३७ हजार कामदार छन् । र सन् २०१४ मा गरिएको एउटा अध्ययनले भन्छ, वर्षमा १ करोड ९० लाख नयाँ पसलले कोलगेटको टुथपेस्ट विक्रि गर्छन् । र करिव ४ करोड नयाँ घरधुरीले कोलगेट टुथपेस्ट प्रयोग गर्छन् । भारतमा त करिव ८६ प्रतिशत घरधुरीले कोलगेट नै प्रयोग गर्ने पनि विश्वासिलो तथ्यांक छ ।